Iindaba -ukuhlolwa kwe-CPC kumzi-mveliso wethu
Eyona ndawo iphambili yesicelo se-coke e-China ngumzi mveliso we-aluminium ye-electrolytic, ebala ngaphezulu kwe-65% yenani elipheleleyo le-coke, elandelwa likhabhoni, i-silicon yoshishino kunye namanye amashishini anyibilikisayo. Ukusetyenziswa kwecoke ecwecwe njengamafutha ubukhulu becala kwisamente, ukuveliswa kwamandla, iglasi kunye namanye amashishini, ukubalwa kwenani elincinci.
Okwangoku, ubonelelo lwasekhaya kunye nemfuno yecoke ene-calcined ngokufanayo iyafana. Nangona kunjalo, ngenxa yokuthunyelwa kwelizwe isixa esikhulu se-coke esine-sulphur ephezulu, ukuhanjiswa kwe-coke ye-calcined ekhaya akwanelanga, kwaye kusafuneka ukungenisa i-coke ephakathi kunye nephezulu ye-sulphur yokufaka.
Ngokwakhiwa kwenani elikhulu leeyunithi zokucofa kule minyaka idlulileyo, imveliso yecoke e-calcined e-China iya kwandiswa.
Kuxhomekeka kumxholo wesalfure, inokwahlulwahlulwa ibe yicoke yesalfure ephezulu (umxholo wesalfure ongaphezulu kwe-3%) kunye necoke yesalfure esezantsi (umxholo wesalfure ongaphantsi kwe-3%).
I-coke yesalfure esezantsi ingasetyenziswa njenge-anodic paste kunye ne-anode esele ibhakwe yesityalo sealuminium kunye negraphite electrode yesinyithi.
Umgangatho ophezulu wecoke yesalfure esezantsi (umxholo wesalfure ongaphantsi kwe-0.5%) ungasetyenziselwa ukuvelisa i-graphite electrode kunye nearhente yecarbonizing.
I-coke yesalfure esezantsi esemgangathweni ngokubanzi (umxholo wesalfure ongaphantsi kwe-1.5%) isetyenziswa kakhulu kwimveliso yee-anode esele zibhakwe.
I-coke ye-petroleum esemgangathweni esemgangathweni isetyenziselwa ukunyibilikisa i-silicon yoshishino kunye nemveliso ye-anodic yokunamathisela.
I-coke yesalfure ephezulu isetyenziswa kakhulu njengamafutha kwizityalo zesamente nakwizityalo ezisebenzisa amandla.
Ukuqhubeka kwesampulu kunye nokuvavanywa kuyinxalenye yenkqubo yethu yemveliso.
I-coke yesalfure ephezulu inokubangela ukuqunjelwa kwegesi ngexesha legraphitization, okukhokelela kuqhekeko kwiimveliso zekhabhoni.
Umxholo womlotha ophezulu uya kuthintela ukwenziwa kwekriststallization kolwakhiwo kwaye ichaphazele ukwenziwa kweemveliso zekhabhoni
Onke amanyathelo aya kuvavanywa ngononophelo, esifuna ukukwenza kukuchonga idatha.
Njengenxalenye yenkqubo yethu esemgangathweni yonke impahla iya kulinganiswa ubuncinci amaxesha ama-3, ukunqanda nakuphi na ukungangqinelani.
Ngaphandle kokumelana necoke green coke resistivity iphezulu kakhulu, kufutshane ne-insulator, emva kokubala, ukunganyangeki kwehle kabukhali, kuyalingana ngokuchaseneyo ne-coke ye-petroleum coke kunye neqondo lobushushu, emva kwe-1300 ℃ yecocco petroleum coke resistivity yehle yaya kwi-500 μm Ω m. okanye njalo.